Ngwaahịa ndị na-ebunye ngwaahịa na ụlọ ọrụ - Ndị na-emepụta ngwaahịa China
XZ450Plus kwụ directional mkpọpu ala rig
XZ420E kwụ directional mkpọpu ala rig
XR360 rotary mkpọpu ala rig
XSL7 / 360 igwu ala nke ọma
XSL3 / 160 na-egwu mmiri nke ọma
XSL3 / 160 na-egwu mmiri nke ọma bụ ụdị crawler ụdị hydraulic nke dị n'elu mmiri na-egwu mmiri. A na-ejikarị ya eme ihe na mkpọpu ala na oge ndị ọzọ. A na-akpọ ya obere egbe nchara eji egwu olulu. Efu-irè. Oke omimi kachasị omimi bụ 300m, nke kachasị na-agafe agafe bụ 330mm, na ikike kachasị elu nke usoro nri nwere ike iru 160kN. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ ma dabara adaba maka iwu.
XSL7 / 350 na-egwu mmiri nke ọma
XSL7 / 350 na-egwu mmiri nke ọma bụ ụdị crawler-ụdị hydraulic zuru ezu nke ọma na mmiri na-egwu mmiri na-agba ọsọ ngwa ngwa, ịdị omimi nke kachasi nke 700m, nkwụsị nke kachasị elu nke 500mm, na ike na-ebuli elu nke usoro nri 350kN.
XSL7 / 360 olulu mmiri nke ọma bụ olulu crawler jupụtara na hydraulic elu draịva mmiri na-egwu mmiri. Omume mmiri ọkụ ahụ nwere ike iru 700m, nke kachasị agafe bụ 500mm, na ike kachasị elu nke usoro nri bụ 360kN. Ndị ahịa tụkwasịrị ya obi nke ukwuu. Ọnụ ahịa ahịa dị oke elu ma arụmọrụ ọnụahịa dị ezigbo mma.
XZ320D kwụ directional mkpọpu ala rig
XZ320D kwụ directional drilling rig nwere mgbatị kachasị nke 800mm, ike kachasị na-adọrọ adọrọ nke 320kN, ọnụọgụ nke 12000N · m, na igwe na-enweghị ọkpọ nke 10t.
XZ1000A kwụ directional mkpọpu ala rig
XZ1000A kwụ awara awara directional reaming kacha nke 1200mm, ikike kachasị na-adọta nke 1075kN, ọnụọgụ nke 45000N · m, na igwe na-enweghị 23t.
XZ420E kwance directional drilling rig nwere ihe omimi kachasị nke 900mm, ikike nkwụsị kacha elu nke 500kN, ọnụọgụ nke 18500N · m, na igwe dị larịị nke 11.2t.
XZ3600 kwụ Directional Drilling rig
XZ3600 kwụ directional drilling rig nwere ihe omimi kachasị nke 1600mm, ikike nkwụsị kacha elu nke 3600kN, ọnụọgụ nke 120,000N · m, na igwe na-enweghị igwe nke 48t.
XZ6600 kwụ directional drilling rig
XZ6600 kwance directional drilling rig nwere ihe omimi kachasị nke 2000mm, ikike nkwụsị kacha elu nke 6600kN, ọnụọgụ nke 210,000N · m, na igwe dị larịị nke 70t.
XZ450Plus kwance directional drilling rig nwere ihe omimi kachasị nke 1000mm, ikike ntụgharị kachasị nke 960kN, ọnụọgụ nke 23500N · m, na igwe na-enweghị igwe nke 20t.
XZ680A kwụ directional mkpọpu ala rig
XZ680A kwance directional drilling rig nwere ihe omimi kachasị nke 1000mm, ikike nkwụsị kachasị nke 725kN, ọnụọgụ nke 31000N · m, na igwe na-enweghị 21t.
YG -13 mini-mkpọpu ala rig
YG-13 mini rotary mkpọpu ala arụnyere na Xugong XE55DA ma ọ bụ Shanhe Intelligent SWE60E excavator mainframe. Site na ịhazigharị ihe na-arụ ọrụ na okirikiri na-arụ ọrụ, a na-ahọrọ ọnụọgụ ndị na-adaba adaba, na kachasị dayameta nke ịkụ ala nwere ike iru 1000 mm.
YG-13 mini rotary drilling rig bụ nhọrọ mbụ maka ịkụ ala na oghere dị warara. Nwere ike ịbanye ngwa ngwa mkpọpu mkpọpu ala enweghị ike ịbanye na saịtị maka ịrụ ọrụ mkpọpu ala, dị ka ụlọ ime ụlọ, ime ụlọ ime ụlọ, ọnụ ala dị ala, nkwụsị dị ala nke saịtị ahụ. Ejirila ihe nlere a na iwu ulo nke ulo oru uzo nke uzo subway nke obodo, okporo uzo na uzo ugbo okporo uzo.
XSL5 / 280 olulu mmiri egwu
XSL5 / 280 olulu mmiri na-egwu mmiri bụ ihe crawler zuru hydraulic n'elu draịva mmiri na-egwu mmiri. A na-ejikarị ya eme ihe maka nyocha ala, mkpọpu ala na ihe ndị ọzọ. Ihe omimi kachasi omimi bụ 500m, nke kachasị na-agafe agafe bụ 400mm, na ike kachasị elu nke usoro nri nwere ike iru 280kN. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, mmekọrịta gburugburu ebe obibi na nchekwa ọkụ.
borehole mkpọpu ala igwe, HDd rig, HDd mkpọpu ala igwe, Kwụ Directional Drilling rig,